The world’s most beautiful baby is born! - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Beauty of the Day – Nandar Hlaing
Next: Fast-Track Hot Food – Part V »
Myanmar Blog » WWW/News » The world’s most beautiful baby is born!
The world’s most beautiful baby is born!
Japanese Magazine Scans – Pop Teen
“အောက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်” by Saya Soe Min
“အောက်တန်းစားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်” လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတဲ့အခါ အမိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အဖကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း၊ အမျိုးဇာတိကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲခြင်း ဆိုပြီး ရှိပါသတဲ့။ တိုင်းပြည်ကိုပုတ်ခတ်၍ဆဲရေးခြင်းဆိုတာ ရှိလာရင်တော့ တော်တော်ကို
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဇလွန်မြို့ ဇလွန်ပြည်တော်ပြန် ဘုရားပွဲ တော် မှာ ဒေသခံ ပရိသတ်တချို့နဲ့ စွမ်းဇာနည်တို့ မတ်လ ၂၇
26th Anniversary of 8.8.88
photo credit to ဓာတ်ပုံ-စိုင်းဇော်(ဧရာဝတီ)
The baby is the latest step inalife-changing year during which Pitt and Jolie went from costars (in last summer’s slick crime thriller Mr. and Mrs. Smith) to supercouple to, finally, Mommy and Daddy.
Technorati Tags: entertainment, news, hollywood, angelina jolie, brad pitt, zahara, maddox, shiloh nouvel, jolie-pitt, mr and mrs smith
Exclusive Pictures of Shiloh Nouvel Jolie-Pitt
Exclusive pictures of the Jolie-Pitt family
Angelina Jolie and her precious children
The 14 million US dollar worth Jolie-Pitt’s family pictures